Goiter (လည်ပင်းကြီးခြင်း) - Hello Sayarwon
Goiter (လည်ပင်းကြီးခြင်း) ကဘာလဲ။
လည်ပင်းကြီးခြင်းဆိုတာ တကယ်တော့ လည်ပင်းမှာရှိတဲ့ သိုင်းရွိုက်ဂလင်းပုံမှန်မဟုတ်ကြီးထွားလာတာဖြစ်ပါတယ်။ အလုံးအကျိတ်ကင်ဆာတော့မဟုတ်ပါဘူး၊ များသောအားဖြင့် နာကျင်မှုမရှိပေမယ့် ကြီးမားလွန်းရင်တော့ ချောင်းဆိုးစေပြီး မျိုရ၊ အသက်ရှူရခက်စေပါတယ်။
Goiter (လည်ပင်းကြီးခြင်း) က ဘယ်လောက်အဖြစ်များသလဲ
အလွန်ကိုအဖြစ်များပြီး အမျိုးသမီးတွေမှာများသောအားဖြင့် ပိုဖြစ်တတ်ပါတယ်။ အသက်အရွယ်မရွေးဖြစ်နိုင်ပြီး အားပေးသောအခြေအနေများကိုရှောင်ခြင်းဖြင့် ထိန်းသိမ်းနိုင်တယ်။
Goiter (လည်ပင်းကြီးခြင်း) ရဲ့လက္ခဏာတွေကဘာတွေလဲ
လည်ပင်းအခြေမှာသိသာတဲ့အဖုပေါ်လာခြင်း – မိတ်ကပ်လိမ်းချိန်၊ မုတ်ဆိတ်ရိတ်ချိန်ဆိုပိုသိသာပါတယ်။
ဖော်ပြထားသောလက္ခဏာတွေအပြင် တခြားလက္ခဏာတွေလည်းရှိနိုင်တာကြောင့် အသေးစိတ်အတွက်ဆရာဝန်နဲ့တိုင်ပင်သင့်ပါတယ်။
တကယ်လို့အထက်လက္ခဏာများတွေ့ရရင် ဒါမှမဟုတ် သိလိုသည်များရှိပါက ဆရာဝန်ပြနိုင်ပါတယ်။ လူတစ်ယောက်နဲ့တစ်ယောက် ခန္ဓါကိုယ်အလုပ်လုပ်ပုံချင်းမတူတာကြောင့် သင့်အတွက်အကောင်းဆုံးအဖြေရဖို့ ဆရာဝန်နဲ့တိုင်ပင်တာ အကောင်းဆုံးဖြစ်ပါလိမ့်မယ်။
Goiter (လည်ပင်းကြီးခြင်း) ကိုဘာတွေကဖြစ်စေသလဲ
အိုင်အိုဒင်းဓါတ်နည်းခြင်း- အိုင်အိုဒင်းဓါတ်ဟာ သိုင်းရွိုက်ဟော်မုန်းထုတ်ပေးရာမှာ လိုအပ်သောဓါတ်ဖြစ်တယ်။ ပင်လယ်ရေနဲ့ ကန်းရိုးတန်းရှိမြေတွင်အများအားဖြင့်တွေ့ရတတ်ပါတယ်။ အိုင်အိုဒင်းဓါတ်နည်းခြင်းကို ဂေါ်ဖီထုပ်၊ ဂေါ်ဖီပန်း၊ ပန်းမုန်လာစသည့် ဟော်မုန်းတားသောစားစရာများက ပိုဆိုးစေပါတယ်။
Graves’ ရောဂါ – တခါတရံ သိုင်းရွိုက်ဂလင်းမှ အလုပ်လုပ်များပြီး သိုင်းရွိုက်ဟော်မုန်းအထုတ်များလျှင်လည်း လည်ပင်ကြီးနိုင်ပါတယ်။ ရောဂါမှာဆိုရင် ကိုယ်ခံအားစနစ်မှထုတ်လိုက်သော ပဋိပစ္စည်းတွေက သိုင်းရွိုက်ဂလင်းကိုမှားယွင်းတိုက်ခိုက်ပြီး သိုင်းရွိုက်ဟော်မုန်းအများအပြားထုတ်စေပါတယ်။ ထိုကဲ့သို့အလုပ်များများလုပ်စေခြင်းကြောင့် သိုင်းရွိုက်ဂလင်းကြီးမားရောင်ရမ်းလာတတ်ပါတယ်။
Hashimoto’s ရောဂါ – သိုင်းရွိုက်ဂလင်းအလုပ်နည်းခြင်းကြောင့်လည်း လည်ပင်းကြီးနိုင်ပါတယ်။ Graves’ ရောဂါလိုပဲ Hashimoto’s ရောဂါဟာ ကိုယ်ခံအားစနစ်မှားယွင်းတိုက်ခိုက်မှုကြောင့်ဖြစ်လာတာပါ။ ဒါပေမယ့် သိုင်းရွိုက်ဟော်မုန်းပိုထုတ်စေတာမဟုတ်ဘဲ လျော့ထုတ်စေတာဖြစ်တယ်။ ထိုကဲ့သို့ဟော်မုန်းနည်းနေခြင်းကြောင့် သိုင်းရွိုက်ဟော်မုန်းများလာစေမည့် TSH ဟော်မုန်းကို pituitary ဂလင်းဟုခေါ်သည့် ခေါင်းရှိဂလင်းတစ်ခုမှပိုထုတ်လိုက်ပါတယ်။ ထို TSH ဟော်မုန်းတွေရဲ့လှုံ့ဆော်မှုနဲ့ အလုပ်ပိုလုပ်ရတာကြောင့် သိုင်းရွိုက်ဂလင်းကြီးလာပြီး လည်ပင်းကြီးလာရပါတယ်။
အဖုများစွာနဲ့သိုင်းရွိုက်ကြီးခြင်း – ဒီအခြေအနေမှာတော့ သိုင်းရွိုက်ဂလင်းရဲ့ နှစ်ဖက်စလုံးမှာ အဖုငယ်များ၊ သို့ အရည်အိတ်များပေါ်လာပြီး ဂလင်းတစ်ခုလုံးအရွယ်ကြီးလာခြင်းဖြစ်တယ်။
အဖုအကျိတ်တစ်ခုသာပေါ်ခြင်း – ဒါကတော့ သိုင်းရွိုက်ဂလင်းပေါ်မှာ အဖုတစ်ခုတည်းသာပေါ်လာခြင်းဖြစ်ပြီး များသောအားဖြင့်ကင်ဆာမဟုတ်ပါဘူး။
သိုင်းရွိုက်ကင်ဆာ – သာမန်သိုင်းရွိုက်အလုံးအကျိတ်များနဲု့ယှဉ်ရင် သိုင်းရွိုက်ကင်ဆာဆိုတာ အလွန်ကိုအဖြစ်နည်းပါတယ်။ ကင်ဆာတွေက များသောအားဖြင့် ဂလင်းရဲ့တစ်ဖက်ထဲမှာသာဖြစ်လေ့ရှိတယ်။
ကိုယ်ဝန်ရှိခြင်း – ကိုယ်ဝန်ဆောင်စဉ်မှာထုတ်တဲ့ဟော်မုန်း- HCG ဟော်မုန်းကလည်း သိုင်းရွိုက်ဂလင်းကို အနည်းငယ်ကြီးစေတတ်ပါတယ်။
Goiter (လည်ပင်းကြီးခြင်း) ဖြစ်နိုင်ခြေကိုဘာ်တွေက မြင့်တက်စေသလဲ
အိုင်အိုဒင်းအစားနည်းခြင်း – အိုင်အိုဒင်းနည်းသောနေရာတွင်နေသူများ၊ စားသုံးမှုနည်းသူတွေမှာ လည်ပင်းကြီးနိုင်ပါတယ်။
အမျိုးသမီးဖြစ်နေခြင်း – အမျိုးသမီးတွေဟာ သိုင်းရွိုက်ရောဂါတွေအဖြစ်များတာကြောင့် လည်ပင်းကြီးရောဂါအဖြစ်များပါတယ်။
အသက်အရွယ် – အသက်ကြီးလာတာနဲ့အမျှ လည်ပင်းကြီးလာနိုင်ပါတယ်။
ရောဂါအခြေအနေ – မိသားစုမှာ သို့ ကိုယ်တိုင် ကိုယ်ခံအားမှားယွင်းအလုပ်လုပ်သော ရာဇဝင်ရှိပါက ဖြစ်နိုင်ချေပိုများပါတယ်။
ကိုယ်ဝန်ဆောင်ခြင်း၊ သွေးဆုံးခြင်း – ကိုယ်ဝန်ဆောင်ချိန်နဲ့ သွေးဆုံးချိန်တွေမှာ သိုင်းရွိုက်ပြဿနာတွေဖြစ်လေ့ရှိပါတယ်။
ဆေးဝါးများ – တချို့သောဆေးများ – စိတ်ဓါတ်ကျခြင်းအတွက်ဆေးများ၊ ဗိုင်းရပ်စ်သတ်ဆေးများ၊ နှလုံးဆေးများ(Cordarone, Pacerone) ၊ စိတ်ရောဂါအတွက်ဆေးများ(Lithobid), ကလည်း ရောဂါဖြစ်နိုင်ချေတိုးစေပါတယ်။
ဓါတ်ရောင်ခြည်ထိတွေ့မှု – ရင်ဘတ်နေရာမှာ ဓါတ်ရောင်ခြည်နဲ့ကုသမှုတွေရှိထားရင် သို့မဟုတ် နျူကလိယလုပ်ငန်းများ၊ ပေါက်ကွဲမှုများ၊ စမ်းသပ်မှုများတွင် ထိတွေ့မှုများရှိထားပါက ဖြစ်နိုင်ချေတိုးနိုင်ပါတယ်။
Goiter (လည်ပင်းကြီးခြင်း) ကို ဘယ်လိုအတည်ပြုပါသလဲ
လည်ပင်းကိုစမ်းသပ်ကြည့်ရုံနဲ့ သိုင်းရွိုက်ဂလင်းကြီးနေခြင်းကို သိနိုင်ပါတယ်။ တချို့အခြေအနေတွေမှာတော့ အကျိတ်ငယ်လေးများရှိမရှိစမ်းသပ်ကြည့်ဖို့လိုပါလိမ့်မယ်။ စစ်ဆေးမှုတွေကတော့-
ဟော်မုန်းစစ်ဆေးမှု – သိုင်းရွိုက်ဂလင်းနဲ့ ဂလင်းမှထုတ်သော ဟော်မုန်းပမာဏကိုသိရန် သွေးစစ်ဆေးနိုင်တယ်။ သိုင်းရွိုက်အလုပ်နည်းပါက ဟော်မုန်းပမာဏနည်းနေနိုင်ပြီး ထိုပမာဏကိုများစေဖို့အတွက် သိုင်းရွိုက်ဂလင်းကိုအားပေးသော TSH ဟော်မုန်းပမာဏတွေကတော့ များနေပါလိမ့်မယ်။ သိုင်းရွိုက်အလုပ်များခြင်းကြောင့်ရသော လည်ပင်းကြီးခြင်းမျိုးတွင်တော့ သွေးတွင်း သိုင်းရွိုက်ဟော်မုန်းပမာဏများပြီး TSH ဟော်မုန်းပမာဏတော့ နည်းနေပါလိမ့်မယ်။
ပဋိပစ္စည်းစစ်ဆေးခြင်း – တချို့သောလည်ပင်းကြီးခြင်းဟာ ပုံမှန်မဟုတ်တဲ့ ပဋိပစ္စည်းတွေထုတ်ခြင်းကြောင့်ဖြစ်တာပါ။ ထို ပဋိပစ္စည်းတွေကိုတွေ့ရဖို့ သွေးစစ်နိုင်ပါတယ်။
အာထရာဆောင်း – လည်ပင်းကိုအာထရာဆောင်းရိုက်ပြီး ပုံရိုက်ဖော်ကြည့်ကာ သိုင်းရွိုက်အရွယ်အစား၊ အဖုအကျိတ်များရှိမရှိစစ်ဆေးကြည့်မှာဖြစ်တယ်။
သိုင်းရွိုက်စကင် – ရေဒီယိုသတ္တိကြွပစ္စည်းများကို တံတောင်ဆစ်ရှိ သွေးပြန်ကြောမှထိုးသွင်းမှာဖြစ်တယ်။ ကုတင်ပေါ်မှာခေါင်းမော့ကာလှဲနေပြီး အထူးကင်မရာများမှ သိုင်းရွိုက်ပုံရိပ်ကိုဖမ်းယူရိုက်ကူးမှာဖြစ်တယ်။ ကြာချိန်မှာ ရေဒီယိုသတ္တိကြွပစ္စည်းများ သိုင်းရွိုက်ဂလင်းဆီရောက်မည့်အချိန်ပေါ်မူတည်ကာ ကွဲပြားသွားနိုင်ပြီး ထိုစစ်ဆေးမှုမှာ အာထရာဆောင်းထက် ပိုပြီးတိကျသော်လည်း ပိုထိခိုက်နိုင်ချေများကာ အချိန်ပိုကုန်၊ ပိုအကုန်အကျများပါတယ်။
အသားစစစ်ဆေးခြင်း – အာထရာဆောင်းအကူအညီဖြင့် သိုင်းရွိုက်ဂလင်းဆီ အပ်ငယ်ဖြင့်ထိုးယူကာ တစ်သျှူးစ သို့ အရည်ယူပြီး စစ်ဆေးခြင်းဖြစ်တယ်။
Goiter (လည်ပင်းကြီးခြင်း) ကို ဘယ်လိုကုသပါသလဲ
သိုင်းရွိုက်အရွယ်အစား၊ လက္ခဏာများနှင့် ဖြစ်စေသောအကြောင်းအရင်းတွေပေါ်မူတည်ပြီး ကုသမှုကကွဲပြားနိုင်ပါတယ်။
စောင့်ကြည့်ခြင်း – တကယ်လို့ အရွယ်သိပ်မကြီးဘဲ ပြဿနာကြီးကြီးမားမားမရှိပါက အရင်ဆုံးစောင့်ကြည့်ပါလိမ့်မယ်။
ဆေးဝါးများ – သိုင်းရွိုက်အလုပ်နည်းပါက levothyroxine (Levothroid, Synthroid) တို့ဖြင့်သိုင်းရွိုက်ဟော်မုန်းအစားထိုးကုသမှုက လက္ခဏာတွေကိုသက်သာစေသလို pituitary ဂလင်းမှ ဟော်မုန်းထွက်ခြင်းနည်းစေတာကြောင့် လည်ပင်းကြီးခြင်းကိုလျော့ကျစေပါလိမ့်မယ်။ သိုင်းရွိုက်ဂလင်းရောင်ရမ်းခြင်းအတွက်တော့ aspirin သို့ စတီးရွိုက်တစ်မျိုးပေးနိုင်ပြီး သိုင်းရွိုက်အလုပ်များခြင်းအတွက်ကတော့ ဟော်မုန်းပမာဏကိုထိန်းညှိပေးမယ့် ဆေးကုသမှုမျိုးလိုပါလိမ့်မယ်။
ခွဲစိတ်မှု – သိုင်းရွိုက်ဂလင်းက မျိုရ၊ အသက်ရှူရခက်လောက်အောင် ကြီးမာလွန်းရင် သို့ အဖုအကျိတ်များစွာနဲ့ဖြစ်နေလျှင် ထို သိုင်းရွိုက်ဂလင်းတစ်စိတ်တစ်ပိုင်း သို့ တစ်ခုလုံးဖယ်ပစ်ရနိုင်ပါတယ်။ သိုင်းရွိုက်ကင်ဆာတွေမှာလည်း ခွဲစိတ်ဖယ်ထုတ်ရတတ်ပြီး ခွဲစိတ်အပြီးမှာ ဖယ်ပစ်တဲ့သိုင်းရွိုက်အရွယ်ပေါ်မူတည်ကာ levothyroxine သောက်ရနိုင်ပါတယ်။ေ
ရေဒီယိုသတ္တိကြွအိုင်အိုဒင်း – တချို့အခြေအနေတွေမှာတော့ ရေဒီယိုသတ္တိကြွအိုင်အိုဒင်းကိုသုံးနိုင်ပါတယ်။ ထိုရေဒီယိုသတ္တိကြွအိုင်အိုဒင်းကို ပါးစပ်မှသောက်သုံးရပြီး သွေးကြောမှတဆင့် သိုင်းရွိုက်ဂလင်းဆီရောက်ကာ သိုင်းရွိုကဆဲလ်တွေကို ဖျက်ဆီးပေးပါတယ်။ ထိုနည်းဟာ လည်ပင်းကြီးခြင်းကိုသက်သာစေနိုင်ပေမယ့် သိုင်းရွိုက်အလုပ်နည်းခြင်းဖြစ်သွားစေတတ်ပါတယ်။ နောက်ပိုင်းမှာ levothyroxine လိုမျိုး သိုင်းရွိုက်ဟော်မုန်းထောက်ပံ့မှုလိုလာနိုင်ပါတယ်။
http://www.thyroid.org/goiter/. Accessed 10 Oct, 2016
2. Goiter – simple.
https://medlineplus.gov/ency/article/001178.html. Accessed 10 Oct, 2016
3. What causes goiter?4possible conditions.
http://www.healthline.com/symptom/goiter. Accessed 10 Oct, 2016
4. Understanding Goiter — The Basics.
http://www.webmd.com/women/understanding-goiter-basics. Accessed 10 Oct, 2016
http://www.mayoclinic.org/diseases-conditions/goiter/basics/definition/con-20021266. Accessed 10 Oct, 2016